Ihe Nleta 7 nke ihe ncheta ndi China: onyinye onyinye | Akụkọ Njem
Ahụkarị ihe ncheta nke China
Mariela Carril | | China, General, Asia njem
China Ọ bụ mba m hụrụ n’anya kemgbe. Ọ bụ oge ochie, pụrụ iche na n'akụkụ a nke Asia ọ bụ ebe ọdịbendị si malite n'ihi na mmetụta ya dị ike. Taa China bụ nnukwu onye ama ama, mana ekwenyere m na ọ kwụsịghị ịdị otu a.
Ọ bụ ihe pụrụ iche, ọkachasị mba, eluigwe na ala n'onwe ya. Ọ bụ nnukwu na ọtụtụ omenala ma otu narị afọ gaferela emewo ka otu n'ime ọdịbendị ndị kasị baa ọgaranya. Ihe dị mma bụ na, dị ka ihe ncheta, anyị nwere ike iburu akụkụ nke ọdịnala ndị nna ochie ahụ, yabụ, ana m ahapụ gị ndepụta nke ihe ncheta kachasị mma na China, ndị na-enweghị ike na-efu na akpa akwa gị.
1 Ngwongwo ndi China
2 China silk
3 China poselin
4 Egbe China
5 Oriọna ndị China
7 Ngwá egwuregwu ndị China
Ngwongwo ndi China
Jade na-bụ mineral siri ike nke nwere ike ịbụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ na-acha ọcha, njikọ nke magnesium na calcium silicate. Ndị China na-arụ ọrụ na ya kemgbe ọtụtụ puku afọ na na omenala ha ọ bụ ihe ọla edo dị na omenala Inca, dịka ọmụmaatụ.
Adenye metụtara mmụọ, omume, ụkpụrụ ọma, ikike na ugwu n'ihi nke ahụkwa, ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'ili ozu ma ọ bụ n'ememe okpukpe. N'ime oge ọ malitere iji ihe ndị ọzọ na ihe eji achọ mma ma na-eji kwa ụbọchị eme ihe nke jed: igbe, combs, combs, ọla.
N'ime nka nke jed enwere uzo di iche iche: ngwo na-anọchi anya omume oma, obi oma, onye isi jiri ndi isi jiri ya mee ihe, ọbọgwụ na-anọchite anya ịhụnanya na piich na-anọchite anya ogologo ndụ, dịka ọmụmaatụ. Gold na nkume gemstones nwere ike ịba uru karịa, mana maka ndị China, jed nwere mkpụrụ obi.
Mgbe ịzụrụ ihe ọ bụla nke ihe ị kwesịrị tụlee ọkwụrụ ahụ, ụcha ya, ụcha ya, na etu ọ siri sie ike. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ikuku egosipụta ọ bụghị ezigbo jed ma ọ bụrụ na e nwere cracks ọ bụ uru na-erughị. Na ee, a ghaghị ilekọta jed: enweghị nzụkọ, ájá, enweghị isi na kemịkal n'ihi na ọ na-emetụta nchapụta ma ọ dị na anyanwụ ogologo oge.
Silk bụ ihe bara uru kemgbe ọtụtụ narị afọ. Ikpuru na-emepụta silk ruo ọnwụ ya, ihe dị ka mita 28 naanị n'ime ụbọchị XNUMX. Ọ bụ ya mere silk mbụ ji dị oke ọnụ. Ndị China malitere ịrụ silk n'oge usoro Han site na afọ ndị ahụ wee banye n'okporo ụzọ Silk a ma ama, ụzọ ahịa si malite na China ruru Europe.
Mgbe ị na-azụ silk ndị China, chọọ nke kachasị dị nro na ị nwere ike. Anya a zụrụ azụ na-amata ezigbo silk na nke adịgboroja mana ọ bụ ezie na ị ga-akpachara anya na eri dị gịrịgịrị ma dịkwa ogologo, nke iguzogide oke, na-egbu maramara mana ọ naghị egbu maramara.
Can nwere ike ịzụta Uwe, akwa aka, igbes ihe mkpuchi silk, akpụkpọ ụkwụ.
Otu n’ime ọrụ aka ndị China nke bu ụzọ Silk Road ruru Europe n’ezie bụ poselin ya. A mụrụ Chinese poselin nke klas ndị bara ọgaranya mana ọ gbasara ngwa ngwa na klaasị dị ala n'ihi ya ike na anwụ ngwa ngwa.
Ite di iche-iche, nkpu tii, igbe di iche iche, ngwa egwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ e mere na-mere nke poselin. Ikekwe oge nka a kacha mara amara biri ebi n'oge usoro Yuan, n'etiti narị afọ nke XNUMX na XNUMX, bụ kpochapụwo acha anụnụ anụnụ na-acha ọcha poselin. Ma usoro ndị eze ọ bụla wetara ụdị nke ha na nka a.
Nwere ike ịzụta poselin ndị China 100% na ahịa ọ bụla ma ọ bụ ebe ịzụ ahịa na obere igbe, dịka ọmụmaatụ, dị nnukwu ihe ncheta maka ụmụ nwanyị.
Kites, egbe, dịka ịkarịrị ịgwa ha, na China a maara ha dị ka zhiyuan y ha bụ otu n’ime ọrụ aka ochie ebe ọ bụ na ọdịdị ha bidoro na narị afọ nke asatọ BC. Kites nwere ọtụtụ ojiji, agha dịkwa, mana ha ghọrọ ndị ama ama n'etiti klaasị niile.
Akpụkpọ ụkwụ ndị China bụ eji achara na akwukwo eme ya ha nwere ike ịkpụzi dị ka dragọn, urukurubụba ma ọ bụ ahụhụ. Ndị nke oge a nwere ụdị ndị ọzọ ma ejiri ya mee ihe ndị a ma ọ bụ jiri plastik na akwa sịntetik mana ha dịkwa mma.
Oriọna ndị China
Kedu onye na-agabeghị n'ụlọ oriri na ọ Chineseụ Chineseụ ndị China nke oriọna akwụkwọ? Ha malitere ogologo oge gara aga, n’agbata narị afọ mbụ na nke atọ, na ha bụ naanị oriọna n'oge ndị ahụ.
Igwe oriọna China enwere ike iji akwukwo, achara, osisi, silk, akwukwo. Ha nwere ma ka na-eji okpukpe eme ihe mana ka oge na-aga ndị mmadụ jiri ha gosipụta oge dị iche iche, yana ịkọwa ihe.
Na mmepe nke ndị ọzọ oge a ọkụ teknụzụ, Chinese lanterns naanị ghọrọ ji achọ. Enweghị ihe ncheta kpochapụwo. Ee n'ezie, enwere ọkụ nke ụdị dị iche iche, gbara gburugburu dika balloons, elongated, nke yiri dragon. Ha na-ere ebe niile.
Cloisonne bu ihe ochie ebuanu glazing Usoro eji mma metal ihe. Ọ sitere na Beijing na narị afọ nke iri na atọ ma rụọ ọrụ ọla. Usoro dị mma karịa oge ọ ghọrọ ezigbo nka.
Usoro a bụ siri ike ma dị oke ọkaibe: Ikpokọta poselin, ọla kọpa, eserese na ihe ọkpụkpọ akwụkwọ ọnụahịa. Taa, a na-ere ha arịa, ite, isi mmiri na ihe ịchọ mma iche iche nke cloisonne na China bụ nnukwu ekspootu.
Ebe abụọ dị mma ịzụta cloisonne bụ Liulichang Street na Beijing Wangfujing Dajie Shopping Street..
Ngwá egwuregwu ndị China
Ndị China emeela ihe eji egwuri egwu mgbe niile na ọtụtụ ọrụ aka dị iche iche na-emetụta ha. Ha bụ ezigbo ihe ncheta n'ihi na mgbakwunye ha na-abụkarị ihe dị ọnụ ala. Enwere nke nkume, osisi, poselin, wax, seramiiki.
E nwere ihe ụmụ nwanyị na-eji akwa na lace eme nke ọdịnala, nke n'aka nke ya na butterflies, ifuru ma ọ bụ anụmanụ, nke a na-enyekarị ụmụaka. Enwere ọnụ ọgụgụ metụtara opera ndị China ma ọ bụ okpukpe ndị China na akụkọ ifo, enwere ndi ochie acha uhie uhie, las igbe egwunke nwa nkita na taa, dị ka ihe ụmụaka ji egwuri egwu nke ụdị na agba niile.
E wezụga ihe ncheta ndị a si China, enwere ndị ọzọ Fans, stampụ ọdịnala, ọgwụ ndị China ma ọ bụ ihe ncheta sitere na ọchịchị Kọmunist. Eziokwu bụ na China bụ nnukwu ahịa yabụ ana m akwado ka ị gaa njikere iburu akpa akwa ma ọ bụ akpa azụ na nzụta gị niile. Ọ dị ọnụ ala, ị nwere ike ịgbanye, ọ bụkwa ogige maka ndị na-enwe mmasị ịzụ ahịa maka ihe ncheta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » China » Ahụkarị ihe ncheta nke China
Rụ ọrụ n'ime ụgbọ mmiri: ọ bụ ezigbo nhọrọ?